SOMALIA iyo Pakistan oo saxiixday heshiis $10.5m ah oo Somalia loogu dhisayo barnaamij muhiim ah - Caasimada Online
Home Warar SOMALIA iyo Pakistan oo saxiixday heshiis $10.5m ah oo Somalia loogu dhisayo...
SOMALIA iyo Pakistan oo saxiixday heshiis $10.5m ah oo Somalia loogu dhisayo barnaamij muhiim ah
Islamabad (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha dalka Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi ayaa maanta goobjoog ka noqday heshiis ku kacaya 10.5 milyan oo dollar oo ay kala saxiixdeen dalkiisa iyo Somalia, kaasi oo Soomaaliya looga caawinayo dhisidda habka keydka aqoonsiga dadweynaha.
Soomaaliya ayaa waxaa heshiiskan goobjoog uga ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Cabdullaahi Faarax Wehliye, madaxa mashruuca kaarka aqoonsiga Dr. Nuur Diiriye Xersi iyo safiirka Soomaaliya ee Pakistan Khadija Maxamed Almakhzumi.
Heshiiskan ayaa dhigaya in maamulka diiwaan-gelinta iyo keydka qaranka Pakistan ee NADRA ay Soomaaliya u hormariyaan taknoolajiyad iyo qalab awood u siinaya dowladda inay yeelato xarunta keydka iyo diiwaanka xogta dadweynaha. Barnaamijkan ayaa sidoo kale Soomaaliya ka caawinaya maareynta doorashooyinka.
Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliye ayaa Pakistan uga mahad-celiyey inay Soomaaliya ka caawineyso habka kaarka aqoonsiga. Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in furitaanka safaaradda Pakistan ee Muqdisho ay sii xoojin doonto xiriirka labada dal.
Haddii qorshahan si rasmi ah loo dhameystiro, dowladda Soomaaliya ayaa awood u yeelan doonta in dhammaan aqoonsiga dadweynaha ku hayso keyd computer, taasi oo fududeyn karta doorashooyinka qof iyo cod, gacanna ka geysan karta sugidda amniga.